Karim Benzema Oo Markii Labaad Maxkamad Maxkamad La soo taagay
HomeWararka MaantaKarim Benzema Oo Markii Labaad Maxkamad Maxkamad La soo taagay
Weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa markii labaad la saaray maxkamad ku taalla dalka Spain, halkaas oo laga filayo in ay ka soo baxaan ganaaxyo dusha lagu soo rogi doono xiddigan reer Farance.
Benzema ayaa lagu haystaa in uu baabuurkiisa ku kexeeyey xawaare ka badan inta sharcigu dhigayo in lagu kexeeyo baabuurta magaalada Madrid dhexdeeda, waxaana uu weeraryahankani ka hor muuqan`ady maxkamadda magaalo madaxda Spain ee Madrid ee Alcobendas.
Kamaradaha ku xidhan waddooyinka ayaa qabtay Benzema oo baabuurkiisu aad u dheeraynayo, isla markaana ku socda xawaare ka baxsan inta sharcigu ogol yahay toddobaado ka hor, taas oo dalka Spain ka ah dembi weyn. Benzema ayaa diiday in uu u jawaabo saxafiyiintii ku sugnaa albaabka hore ee maxkamadda kuwaas oo isku deyey in ay arrintan wax ka weydiiyaan.
Ma aha markii ugu horeysay ee weeraryahankan Real Madrid uu jebiyo sharciga xakamaynta xawaaraha baabuurta, hase yeeshee 3dii February 2013 ayay kamaradaha boolisku qabteen isaga oo ka soo noqday Granada kuna sii jeeda Madrid, markaas oo uu baabuurkiisu ku socday 216 kilometer saacaddiiba, iyadoo waddadaas loogu talo galay in lagu socdo ugu badnaan 100 kilometer saacaddii.
Benzema ayaa laga yaabaa in ay maxkamaddu ku xukunto in uu biyo €150 Euro maalin walba muddo siddeed bilood ah iyo in laga qaado liisanka wadista baabuurta in muddo ah.
Sannadkii 2009 waxa sidoo kale uu Benzema galay laba shil oo u dhacay si lagu tilmaamay layaab.
‘Cid walba dalkayaga waanu barnay’ – Diouf Oo Sheegay In Dalkiisu Dunida Caan Ka Noqday Wacdarihii Koobkii Adduunka ee 2002 Darteed
Wakhtiga Ay Feedhtamayaan David Haye iyo Tony Bellew Oo La Shaaciyey